Lovely Crafts - SOLD! and their stories
Monday, 11 January 2010 - Posted by Shwe Thiri Khit
I want to share some great news. Both my handmade Fish Jar and Black Cat Jewellery Box were sold today. I seriously did not expect those two to be sold as I made them solely for fun. They were almost dusty by the time they found their new owner since they were made pretty long time ago.
One dayafriend named Milon visited my online gallery and asked me in details of literally all my works. Then she said “Not only I like your arts, I also love their background stories” then she continued “I especially love the crafts because each of them tellsavery interesting story.” And she bought those two! Thanks so much for your support Milon!
ဒီနေ့ဝမ်းသာစရာကိစတခု အားလုံးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Handmade Fish Jar လေးနဲ့ Black cat jewellery box လေးတပြိုင်တည်းရောင်းထွက်သွားပါတယ်။ ဒီပစည်းလေးတွေကို သိပ်လေးလေးနက်နက်မထားဘဲ အပျော်လုပ်ခဲ့တာမို့ တနေ့ရောင်းထွက်လိမ့်မယ်လို့လည်း မမျှော်လင့်ခဲ့တာအမှန်ပါပဲ။ လုပ်ထားခဲ့တဲ့သက်တမ်းက အနည်းငယ်ကြာနေပြီမို့ ဖုန်တွေလည်းတက်နေပေမယ့် သူတို့ပိုင်ရှင်သစ်ဆီကိုသွားရတော့မှာပါ။
တရက် ကျမရဲ့deviantart webpage ကို Milon လာလည်တဲ့အခါ ကျမလုပ်တဲ့crafts အကြောင်းတွေကို တခုချင်းစီ သူမစပ်စုလို့နေတယ်။ “Story လေးကို သဘောကျပါတယ်။ ပန်းချီကားတွေမှာသာမကဘူး Crafts တွေမှာပါ ရွှေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ခံ background story လေးတွေရှိနေတယ်။” လို့ Milon ကချီးမွှမ်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးတဲ့အတွက် Milon ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
Fish Jar (Handmade)
I really wanted to keep some fishes withafish tank but the landlord could not tolerate any pets so instead of any real fish I made my own little fish and her habitat: the fish jar.
It’s also coincidental that my hubby nick named me as “fishie” while his nick being “chubby cat”. Also during that time when I made that fish jar I was staying indoors most of the time so that fish jar more or less portrayed my life for that particular period too.
(I will tell you the details of the Fish & Cat Story later but if you are interested you can find some of it under Fish Tag on my blog.)
အလှငါးကန်လေးမွေးချင်ခဲ့ပေမယ့် အိမ်ရှင်က pet မမွေးရဘူးဆိုတဲ့ စည်းကမ်းချက်ကို အိမ်ငှားအနေနဲ့လိုက်နာခဲ့ရတယ်။ အိမ်အများစုကတော့ ဒီလိုပဲလေ… ငါးမွေးချင်တဲ့စိတ်အတွက်အာသာပြေစေရန် Handmade Fish Jar လေးကို လုပ်ခဲ့တယ်။
ခင်ပွန်းက ရွှေခေတ်ကို “Fishie” လို့အမြဲခေါ်ပြီး ရွှေခေတ်ကလည်းသူ့ကို “ကြောင်ကြီး”လို့နာမည်ခေါ်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကာလတုန်းက Fish bowl ထဲက ငါးတကောင်လို အပြင်ဘယ်မှမရောက်ဘူးလေ။ (Fish & Cat Story ဖတ်လိုလျှင် blogထဲမှ Fish ဆိုတဲ့ tag ကိုသွားကြည့်ပါရန်)
Materials of Fish Jar
Glass bottle, Handmade papers and cards,Handmade paper strings/ needle string, ribbon, Beads and Sequences, Sparkling powders.
Black Cat Jewellery Paper Box (Handmade)
Materials & How to
Handmade paper box, black and white acrylic colours, ink, sequences, andakey. Hard paper, more like cardboard paper was used to makeabox. Then I used acrylic ink to paint black and white colours to the box. A cat andaflower were drawn with ink andatiny stone was glued to top of the box. Then the exteriors of the box were repainted with thick layers of black ink to give an embolden feel. Handmade paper box, black and white acrylic colours, ink, sequences, andakey.
ကတ်ထူစကူမာမာနှင့် ဘူးလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး acrylic colour နဲ့ဖြူနက်ခြယ်ပါတယ်။ ပန်းနှင့်ကြောင်ရုပ်ပုံကိုink ဖြင့်ရေးဆွဲပြီးနောက် ကျောက်ကိုကော်ကပ်လိုက်ပါတယ်။ ဘူးပြင်မှဖောင်းကြွနေအောင် ဆေးအခဲလိုက် ပြန်တင်ပါတယ်။
Do you know the story behind the box?? Some of you might be able to predict when you seeapicture of the cat. Also because this is very similar to the painting named “Childhood Story”. Please havealook at Childhood Story by following this link.
You know sometimes I miss that old dark cat which used to visit our compound and I can always remember that cat. If my brain represents the box, that cat can then be portrayed as my part of my memory together with the garden I can remember which in turn is represented by the flower. So when I open the box I can then revisit my memories and visually remember that cat with the past surroundings. To do that I use the key to unlock my memories.
ဒီ background story လေးရောသိကြမလားပဲ? “Childhood Story” ဆိုတဲ့ ပန်းချီပုံလေးရဲ့ ပုံပြင်သမိုင်းကြောင်းတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကြောင်နက်ရုပ်ကလေးမြင်ရင် Childhood Story post ဖတ်ဖူးသူတွေကတော့ ပြန်မှတ်မိလို့သိနေမှာပါ။ (ယခင်ပို့စ်အဟောင်း၏ အဆက်ကိုပြန်ဖတ်ချင်လျှင် Childhood Story ဆိုတဲ့link လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားကြည့်ရန်)
ဟုတ်တယ်။ ငယ်ငယ်က ခြံထဲကိုမကြာခဏလာလာလည်တတ်ခဲ့တဲ့ ကြောင်နက်လေးကိုပြန်လွမ်းမိတယ်။ ရွှေခေတ်မှတ်ဥာဏ်ဟာ ဒီစကူဘူးလေးဆိုပါစို့။ အဲဒီကြောင်နက်လေးကို ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားလို့အမြဲရှိနေခဲ့ပြီး jewellery box အနေနဲ့ပါ ဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘူးလေးကိုပန်းခြံအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပြီး အထဲကပန်းပွင့်ဟာ ပန်းခြံရဲ့သင်္ကေတတခုလိုလို ထည့်ပေးထားလိုက်တယ်။ ဘူးအဖုံးလေးလှန်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်သဘောကျခဲ့တဲ့ ကြောင်နက်လေး “KiKi” ပြန်မြင်ရအောင်ဖန်တီးလို့ ဟိုးငယ်ငယ်ကရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို သော့ငယ်တချောင်းနဲ့ ပြန်ဆွဲခေါ်ယူခဲ့တယ်………
ငါးလေးကို ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဟိုနေ့ကတည်းက ကြည့်မိတယ် သီရိရဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ပန်ချီလေးကတော့ သီရိ ဆွဲမှန်းသိတယ်။
မြတ်မွန် on 12 January 2010 at 03:32